AVY AMIN’NY SAMPANAN-DALANA TELO HO AMIN’NY HARENA, – filazantsaramada
AVY AMIN’NY SAMPANAN-DALANA TELO HO AMIN’NY HARENA,
Publié parfilazantsaramada	 septembre 13, 2013 octobre 15, 2013 Laisser un commentaire sur AVY AMIN’NY SAMPANAN-DALANA TELO HO AMIN’NY HARENA,
HISAFIDY NY ZAVA-POANA SA NY TENA HARENA?
“Kanjo nony nikeninkenina tetsy sy teroa ny mpanomponao, dia lasa izy” (I Mpanj. 20:40)
Araka ny hita ao amin’ny Mpanjaka voalohany, dia nisy mpaminany iray nilaza angano tamin’ny Mpanjaka Ahaba. Nilaza izy fa niandry gadra iray, nefa nanao tandrevaka izy tamin’izany (“sahirana etsy sy eroa”) ka dia nandositra ilay gadra. Izany tantara izany dia nataony indrindra mba nisarihany ny sain’i Ahaba tamin’ny namelany an’i Ben-Hadad mpanjakan’ ny Syria handositra.
Marobe ny olona mamela ny zava-dehibe tsy ho vita eo amin’ny fiainany noho ny fiahiany zavatra tsy dia manan-danja loatra; tsy hitany ny zava-dehibe eo amin’ny fiainana. Ny vokany dia araka izay mety omentsika anarana hoe “ny fandresena mahonena azon’ ny zava-poana”. Manana tantara lava ny fanenjehan’ny olona zava-poana. Ireo mpizahan-tany tany Roma dia afaka mitsidika ny fatsakàn’i Trevi. Avy amin’ny teny latina hoe ‘trivium’ no nakana ny anarany, izay midika hoe fihaonan’ny lalana telo sampana. Azonao saintsainina amin’izany ny ezaka nataon’ny olona mihetsiketsika hananganana tsenakely hivarotana entana amin’ny vahiny. Noho ny toerana misy azy, ny entana (izay mazàna tsy dia misy vidiny loatra) dia nantsoina hoe “trivia” (na adika hoe zava-poana).
Tonga teto amin’ny tontolontsika sy tao am-pontsika Jesosy, tamin’ny alalan’ny finoana izay naorin’ny Fanahy Masina mba hamonjena antsika amin’ny ota sy fahafatesana. Nosarihan’ny Mpamonjy ny saintsika hanalavitra ny zava-poanan’izao tontolo izao, hanalavitra ny hazavàna mitsilopilopin’ny olombelona izay mihazona antsika tsy hijery ny masoandron’Andriamanitra, hanalavitra ny fisarantsarahan’ny fianantsika amin’ny finiavantsika hanenjika ny tombotsoa feno fitiavan-tena ka mahatonga antsika hisahirana “etsy sy eroa”. Fa aompany kosa ao amin’ny haren’ny Teniny sy ny hafaliana amin’ny fanompoana Azy ao amin’ny Fanjakany. Hoy ny tonon-kirantsika ao amin’ny fihirana hoe: “Maro ireo mandany ny fiainany amin’ny alahelo, amin’ny zava-poana sy ny hahazo izay zavatra tsy manam-piorenana”. Ho antsika kristiana dia tsy mitombina intsony izany.
Ny Tompo Jesosy Kristy mampahery anao!
”Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana”
tél : 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
Publié parfilazantsaramada septembre 13, 2013 octobre 15, 2013 Publié dansUncategorized
NY FINOANA MAHAVONJY
Isantaonan’ny Synodam-Paritany Avaratrimania (SPAM)